Home Wararka Dibada Tirada dadka Kenyaanka ah ee soo food saartay abaarta oo kor u...
Tirada dadka Kenyaanka ah ee soo food saartay abaarta oo kor u dhaaftay 4 milyan
Tirada dadka wajahaya gaajada abaarta awgeed dalka ayaa kor u kacday 4.1 milyan bishii June halka ay ahayd 3.5 milyan bishii May, maamulka qaran ee maareynta abaaraha (NDMA) ayaa ku sheegay warbixin qiimeyn ah oo ay soo saareen.
Hay’adda dawladdu waxay xustay in xaaladda abaartu ay sii xumaanayso, iyadoo dadka ugu badan ee ay saamaysay abaartu ay ku sugan yihiin 19 ka mid ah 23-ka gobolka ee Kenya iyo dhul-oomanaha ah.
Lix ka mid ah kowntiyada ay dhibaatadu saamaysay oo kala ah Laikipia, Mandera, Marsabit, Wajeer, Isiolo iyo Samburu ayaa ku jira xaalad abaareed oo xoog leh, sida ay sheegtay Hay’addw NDMA.
Dhinaca kale, 13 gobol oo ay ku jiraan Kilifi, Turkana, West-Pokot, Meru (Waqooyi), Garissa, Kajiado, Kitui, Taita-Taveta, Tharaka-Nithi iyo Tana-River ayaa ku jira marxalad abaareed oo u baahan in laga feejignaado.
“Nafaqo-xumo ba’an ayaa sidoo kale laga soo sheegay gobollada oo dhan iyadoo 942,000 oo carruur ah oo da’doodu u dhaxayso 6-59 bilood ay hayso nafaqo-xumo ba’an iyo 134,000 oo xaaladood oo haween uur leh ama naas nuujin ah ay hayso nafaqo-darro ba’an oo u baahan daaweyn,” ayay tiri hay’addu.
In ka badan hal milyan oo xoolo ah oo isugu jira Geel, Lo’, Ari iyo Ari ayaa ku dhintay abaaraha gobollada dalka Kenya ka jira, iyadoo hay’addu ay ka digtay in dhimashadu ay kor u kacdo, iyadoo xaaladda abaaruhu ay ka sii darayso.
Malaayiin qof oo ku nool Geeska Afrika ayaa wajahaya gaajo iyo dhimasho, sida ay sheegtay Hay’adda Qaramada Midoobay u qaabilsan Cunnada iyo Beeraha ee FAO, Urur Goboleedka IGAD, Hay’adda Qaramada Midoobay u qaabilsan Cunnada Adduunka ee WFP iyo Digniinta ugu horreysa ee Macluusha, waxaana dalalka ugu daran ay ka jiraan Abaarta ay tahay Kenya, Somalia iyo Ethiopia.
Previous articleRa’iisul wasaare Rooble oo qaabilay safiirka dalka Sacuudiga
Next articleMuuse Biixi oo ka hadlay muranka Siyaasadeed ee ka taagan Somaliland
Xiisada ka Taagan Kongo oo sii Xumaatay.